နာမည်ကြီး စာရေးဆရာများရေးဖွဲ့ထားတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် အကြံပေးလမ်းညွှန်ချက်များက သင့်ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ WQ ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ WQOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် မတ်လ၂၉ရက်ကနေ ဧပြီလ၁၉ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Aries ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Aries ရာသီခွင်ဆိုင်ရာဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ ARI ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ ARIOFF ဟုပေးပို့ပါ။
အမျိုးသမီးများအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ဖက်ရှင်အလှအပနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များကို ဖုန်းထဲသို့အရောက်ရယူရန် 8302 သို့ WM ဟုပေးပို့ပါ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုလျှင် ၇၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ WMOFF ဟုပေးပို့ပါ။
ချစ်တဲ့သူနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ရန် နည်းလမ်းများကို သင့်ဖုန်းထဲသို့တိုက်ရိုက် ရယူရန် 8302 သို့ DAT ဟုပေးပို့ပါ။အကြောင်းအရာတစ်ခုလျှင် ၇၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ DATOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Football Tips EPLT ဝန်​​ဆောင်​မှုမှ ​​​ပရီးမီးယားလိဂ်နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ပွဲစဉ်ရလဒ်များကို ​တစ်​ရက်​လျှင်​ SMS နှစ်​​စောင်၊ တစ်စောင် ၁၅၈ကျပ်​နှုန်းဖြင့်​ ​နေ့စဉ်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာစကားဖြင့်​ ရယူနိုင်​ပါသည်​။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ EPL ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ EPLOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO27 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO27OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO6 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO6OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Wellness Tips isaservice that provide subscribers with daily tips on how to stay healthy the natural way for only 158Ks/tip. To subscribe, text WE ON to 8302. To unsubscribe, text WE OFF to 8302.
ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရယူထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် အစားအသောက်လမ်းညွှန်များကို တစ်ခု၆၈ကျပ်တည်းနဲ့ ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ DT ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ DTOFF ဟုပေးပို့ပါ။
မိသားစုသံယောဇဉ်မေတ္တာတွေအကြောင်း ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စေ့ဆော်အမှာစကားများက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ FQဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FQOFF ဟုပေးပို့ပါ။
နေ့စဉ်အသုံးစရိတ်စီမံခန့်ခွဲရန်နဲ့ ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်ရန်အတွက် Budget Tips ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူနိုင်ပါပြီ။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် ၆၈ကျပ်ဖြင့် ရယူရန် 8302 သို့ BT ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ BTOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO14 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO14OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO8 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO8OFF ဟုပေးပို့ပါ။
ဖျားနာအနာတရများကို ကုသပေးနိုင်မယ့် ရှေးဥိးသူနာပြုအခြေခံလမ်းညွှန်များကို အကြောင်းအရာတစ်ခု ၆၈ကျပ်ဖြင့် ရယူလိုက်ပါ။ ရယူရန် 8302 သို့ FA ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FAOFF ဟုပေးပို့ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နောက်ဆုံးသတင်းအကြောင်းအရာများကို International News ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ အကြောင်းအရာတစ်ခု ၅၉ ကျပ်ဖြင့် နေ့စဉ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ INT ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ INTOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO21 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO21OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO18 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO18OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO7 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO7OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO16 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO16OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO1 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO1OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO23 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO23OFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် သြဂုတ်လ ၂၃ရက်ကနေ စက်တင်ဘာလ၂၂ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Virgo ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Virgo ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ VIR ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ VIROFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် မေလ၂၁ ရက်ကနေ ဇွန်လ ၂၀ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Gemini ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Gemini ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ GEM ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ GEMOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Funny Quote ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာများရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သင့်ကိုရယ်မောပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုပေးနိုင်မယ့် အမှာစကားများက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ FUN ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FUNOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Weight Loss Tips ​ဝန်​​ဆောင်​မှုမှကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများကို ​တစ်​ရက်​လျှင်​ SMS တစ်​​စောင်၊ ၁၅၈ကျပ်​နှုန်းဖြင့်​​နေ့စဉ်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်​ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ WL ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ WLOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Football Tips Goals ​ဝန်​​ဆောင်​မှုမှ ​​​ဂိုးအရေးအတွက်ရလဒ်များနှင့်ခန့်မှန်းချက်များကို​တစ်​ရက်​လျှင်​ SMSတစ်စောင် ၁၅၈ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေ့စဉ်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာစကားဖြင့်​ ရယူနိုင်​ပါသည်​။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ FG ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FGOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Football Tips Best Match ဝန်​​ဆောင်​မှုမှအကောင်းဆုံးဘောလုံးပွဲစဉ် ခန့်မှန်းချက်များကို​တစ်​ရက်​လျှင်​တစ်ကြိမ် SMS တစ်စောင် ၁၅၈ကျပ်နှုန်းဖြင့်​ ​နေ့စဉ်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာစကားဖြင့်​ ရယူနိုင်​ပါသည်​။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ FBM ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FBMOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို၁၅၈ကျပ်ဖြင့် သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FOOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Love Quote ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ နာမည်ကြီးစာရေးဆရာများရေးဖွဲ့ထားတဲ့ စိတ်နှလုံးနွေးထွေးစေတဲ့ ချစ်စဖွယ်အမှာစကားများက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ LOVE ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ LOVEOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်ကနေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Aquarius ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Aquarius ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ AQU ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ AQUOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO29 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO29OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO28 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO28OFF ဟုပေးပို့ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း စတင်လေ့ကျင့်ရန်နဲ့ ပုံမှန်လုပ်နေကျ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံထဲ ပေါင်းထည့်နိုင်ရန်အတွက် Fitness Tips ဝန်ဆောင်မှုကို တစ်ခု၆၈ကျပ်ဖြင့် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FIT ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FITOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO26 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO26OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO24 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO24OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO20 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO20OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO19 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO19OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့် သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO17 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO17OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO15 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO15OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO13 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO13OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့် သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO12 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO12OFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်အနှစ်သက်ဆုံးအဆိုတော်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်များကို တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ် ရယူလိုက်ပါစို့။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် ၆၈ကျပ်ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရယူရန် 8302 သို့ MR ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ MROFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင့်ရဲ့အိမ်မက် အဓိပ္ပာယ်ကို ပုံဖော်နိုင်ဖို့ Dream Interpretation ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်ကြပါစို့။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် ၆၈ ကျပ်သာ ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ရယူရန် 8302 သို့ DI ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ DIOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO5 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO5OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO4 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO4OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO3 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO3OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO2 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO2OFF ဟုပေးပို့ပါ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သာယာတဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ အချစ်ရေး၊အိမ်ထောင်ရေးအကြံပေးစကားများကို အကြောင်းအရာတစ်ခု ၆၈ကျပ်ဖြင့် ရယူလိုက်ပါ။ ရယူရန် 8302 သို့ LF ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ LFOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို အခုပဲ မြှင့်တင်လိုက်ကြပါစို့။ အလုပ်အင်တာဗျူးအတွက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ခရီးရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် လမ်းညွှန်ချက်များကို တစ်ခုလျှင် ၆၈ကျပ်ဖြင့် ရယူရန် 8302 သို့ CT ဟု ပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ CTOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Gold and Exchage Rate ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ ရွှေ ရောင်းဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ကို ခန့်မှန်းကြရအောင်။ ရွှေဈေးကွက်သတင်းအချက်အလက်များကို သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ GE ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ GEOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်ကနေ မတ်လ ၂၀ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Pices ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Pices ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ PIS ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ PISOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဧပြီလ ၂၀ ရက်ကနေ မေလ၂၀ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Taurus ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Taurus ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ TAU ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ TAUOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်ကနေ နိုဝင်ဘာလ ၂၁ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Scorpio ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Scorpio ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ SCO ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ SCOOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ရက်ကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Sagittarius ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Sagittarius ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ SAG ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ SAGOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် စက်တင်ဘာလ၂၃ ရက်ကနေ အောက်တိုလာ ၂၂ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Libra ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Libra ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ LIB ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ LIBOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဇူလိုင်လ၂၃ ရက်ကနေ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Leo ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Leo ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ LEO ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ LEOOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဒီဇင်ဘာလ၂၂ ရက်ကနေ ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Capricon ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Capricon ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ CAP ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ CAPOFF ဟုပေးပို့ပါ။
သင်သည် ဇွန်လ ၂၁ ရက်ကနေ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်အတွင်း မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သင့်ကို Cancer ရာသီဖွားတစ်ဦးအဖြစ် မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။Cancer ရာသီခွင်ဆိုင်ရာ ဟောကြားချက်များက သင့်ရဲ့ဖုန်းထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုလျှင် ၇၅ကျပ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ CAN ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ CANOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Health Tips ​ဝန်​​ဆောင်​မှုမှ ​ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတများကို တစ်​ရက်​လျှင်​ SMS တစ်​​စောင်​၊ ၇၅ကျပ်နှုန်းဖြင့်​ ​နေ့စဉ်​ ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို မြန်မာဘာသာစကားဖြင့်​ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ HT ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ HTOFF ဟုပေးပို့ပါ။
​ငွေ​ကြေးလဲလှယ်​မှုလမ်းညွှန်​ဝန်​​ဆောင်​မှုမှ ​​​​နောက်​ဆုံးရ​ငွေ​ကြေး​ဈေးနှုန်းများကို ​တစ်​ရက်​လျှင်​ SMS နှစ်​​စောင်​၊ တစ်စောင် ၁၅၈ကျပ်နှုန်းဖြင့်​ ၊ ​နေ့စဉ်​ရရှိမှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို အင်္ဂလိပ်​ဘာသာစကားဖြင့်​ ရယူနိုင်​ပါသည်​။ ။ ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ CE ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ CEOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Beauty tips ဝန်​​ဆောင်​မှုမှ ပြုလုပ်​ရလွယ်​ကူပြီး သင့်​အသားအ​​ရေနှင့် ဆံ​ကေသာအတွက်​ အမှန်​တကယ်​အကျိုးသက်​​ရောက်​မှုရှိ​စေမည့်​ နည်းလမ်း​ကောင်း​တွေကို ရရှိနိုင်​မှာဖြစ်​ပါသည်​။ ဤဝန်​​ဆောင်​မှုကို မြန်​မာဘာသာစကားဖြင့်​ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။။ တစ်စောင် ၁၂၆ကျပ်ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် 8302 သို့ BEA ဟုပေးပို့ပါ။ ရယူခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ BEAOFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့် သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO30 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO30OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO31 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO31OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO25 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO25OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO22 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO22OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO11 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO11OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO10 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO10OFF ဟုပေးပို့ပါ။
Fortune Tips ဝန်ဆောင်မှုနဲ့အတူ သင့်ရဲ့အနာဂတ်မှာ ဘာတွေ့ကြုံတွေ့လာစရာရှိလဲဆိုတာ လေ့လာကြပါစို့။သင့်ရဲ့ကံဇာတာစက်ဝန်းကို သိရှိပြီး အကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်စေဖို့ ဟောကြားချက်များကို ၁၅၈ကျပ်ဖြင့်သင့်ဖုန်းထဲသို့အရောက် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ရယူရန် 8302 သို့ FO9 ဟုပေးပို့ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် 8302 သို့ FO9OFF ဟုပေးပို့ပါ။